လီဗာပူးလ်ထက် ယူနိုက်တက် (သို့) ချယ်လ်ဆီး တစ်သင်းသင်းကိုသာ တီမိုဝါနာပြောင်းရွှေ့သင့်ကြောင်း ဟာမန်းတိုက်တွန်း – News
လီဗာပူးအသင်းကွင်းလယ်ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒီယက်မာဟာမန်းကတော့ လိုက်ဇစ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြကစားနေတဲ့ ဂျာမဏီတိုက်စစ်မှူး တီမိုဝါနာအနေနဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းထက် ယူနိုက်တက် ဒါမှမဟုတ် ချယ်လ်ဆီးအသင်းတွေကိုသာပြောင်းရွှေ့သင့်ကြောင်းတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ Goal. com ကဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၂၃နှစ်အရွယ်ရှိ တီမို ဝါနာဟာလက်ရှိရာသီ လိုက်ဇစ်အသင်းနဲ့ ပြသနေတဲ့ ခြေစွမ်းကြောင့် ဥရောပအသင်းကြီးအများစုရဲ့ စောင့်ကြည့်ခြင်းခံနေရသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ၀ါနာကတော့ လီဗာပူးလ် အသင်းနဲ့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာက သူ့အတွက်တော့ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်။
၀ါနာက ဥရောပအသင်းကြီး တစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့သူ့အနေနဲ့ အသင့်ဖြစ်နေပေမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်းကတော့ သူ့အတွက် အကောင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ သတင်းတွေထွက်နေပေမယ့် လီဗာပူးလ်မှာ သူ့ရဲက ကစားပုံက အံဝင်ပါ့မလားဆိုတာတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်။ ၀ါနာက ကွင်းလယ်ကနေ တိုက်စစ်ကို ထိုးဖောက်ကစားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လီဗာပူးလ် အခုလက်ရှိကစားနေသူက ဖာမီနိုပါ။ ဒါကြောင့်သူတောင်ပံထွက်ကစားမယ်ဆိုလည်း မာနေး နဲ့ ဆာလာတို့ရှိနေပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့သူ့အတွက် ပွဲထွက်ခွင့်က အာမခံမှုရှိမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ဒါကိုသူလည်း နှစ်သက်မယ်မထင်ပါဘူး ကျွန်တော်ကတော့ ၀ါနာက လီဗာပူးလ်ထက် ချယ်လ်ဆီး ယူနိုက်တက်တို့နဲ့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်” လို့ ဟာမန်းကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
လီဗာပူးအသငျးကှငျးလယျကစားသမားဟောငျးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒီယကျမာဟာမနျးကတော့ လိုကျဇဈအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွကစားနတေဲ့ ဂြာမဏီတိုကျစဈမှူး တီမိုဝါနာအနနေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးထကျ ယူနိုကျတကျ ဒါမှမဟုတျ ခယျြလျဆီးအသငျးတှကေိုသာပွောငျးရှသေ့ငျ့ကွောငျးတိုကျတှနျးပွောဆိုခဲ့တယျလို့ Goal. com ကဖျောပွသှားခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၂၃နှဈအရှယျရှိ တီမို ဝါနာဟာလကျ ရှိရာသီ လိုကျဇဈအသငျးနဲ့ ပွသနတေဲ့ ခွစှေမျးကွောငျ့ ဥရောပအသငျးကွီးအမြားစုရဲ့ စောငျ့ကွညျ့ခွငျးခံနရေသူတဈဦးဖွဈပွီး ဝါနာကတော့ လီဗာပူးလျ အသငျးနဲ့ သတငျးတှထှေကျပျေါနတောက သူ့အတှကျတော့ ဂုဏျယူစရာဖွဈကွောငျးထုတျဖျောပွောဆိုထားတာရှိပါတယျ။ ဝါနာက ဥရောပအသငျးကွီး တဈသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့သူ့အနနေဲ့ အသငျ့ဖွဈနပေမေယျ့ လီဗာပူးလျအသငျးကတော့ သူ့အတှကျ အကောငျးဆုံးနရော ဖွဈမယျမထငျပါဘူး။ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့ သတငျးတှထှေကျနပေမေယျ့ လီဗာပူးလျမှာ သူ့ရဲက ကစားပုံက အံဝငျပါ့မလားဆိုတာတော့ မေးခှနျးထုတျစရာရှိပါတယျ။ ဝါနာက ကှငျးလယျကနေ တိုကျစဈကို ထိုးဖောကျကစားသူတဈဦးဖွဈပွီး လီဗာပူးလျ အခုလကျရှိကစားနသေူက ဖာမီနိုပါ။ ဒါကွောငျ့သူတောငျပံထှကျကစားမယျဆိုလညျး မာနေး နဲ့ ဆာလာတို့ရှိနပေါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့သူ့အတှကျ ပှဲထှကျခှငျ့က အာမခံမှုရှိမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး၊ ဒါကိုသူလညျး နှဈသကျမယျမထငျပါဘူး ကြှနျတျောကတော့ ဝါနာက လီဗာပူးလျထကျ ခယျြလျဆီး ယူနိုကျတကျတို့နဲ့ ပိုအဆငျပွမေယျထငျပါတယျ” လို့ ဟာမနျးကပွောဆိုသှားခဲ့ပါတယျ။
အေဗရာဟမ် ကို လစာတိုးမြှင့်ပြီး ကာလရှည် သက်တမ်းတိုးစာချူပ် ချူပ်ဆိုသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ ချယ်လ်ဆီး
ယူနိုက်တက် ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေဟာ နည်းပြမော်ရင်ဟိုမှာ တိုက်ရိုက် တာဝန်ရှိသလို ကစားသမားတွေဘက်မှာလည်း တာဝန်ယူမှု ၊ တာဝန်ခံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ သုံးသပ်သွားတဲ့ ရွိုင်ယန်ဂစ်
ဖာနန်ဒက်စ်ကြောင့် ပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ